Ny fiaraha-monina mpanjono madinidinika any Halong Bay, Vietnam, dia miankina amin'ny ranomasimbe ho an'ny fivelomana. Ny MPA dia mety miteraka fameperana amin'ny fanjonoana, izay mety hanana vola ara-toekarena sy sosialy. Ny tontolon'ny kolontsaina sy ny fandaniana ara-tsosialy sy tombontsoa avy amin'ny MPA dia tokony hodinihina ao amin'ny tambajotra MPA. Sary © S.Kilarski
Ny fiheverana ara-tsosialy sy ara-toekarena dia tokony hodinihina rehefa mamolavola sy manatsara ny tambajotra MPA na MPA. Ny fananganana tambazotra MPA miaraka amin'ny tanjona sosialy sy ara-biophysikalika dia afaka manampy amin'ny fifindrana avy amin'ny sehatra tokana manerantany ho amin'ny fomba fijery ankapobeny, tafiditra ao anatin'izany ny fifandraisan'olombelona sy ny tontolo iainana, ary ny fiantraikany amin'ny fiantraikany. Ity fomba fiasa maromaro ity dia afaka mamorona fototra iray izay manova ny fomba itodian'ny olona ny fifandirana eo amin'ny tontolo iainana sy ny toekarena.
Raha azo atao, dia diniho sy ovaina ny tolotra ecosystemmanokatra fisie PDF ny faritra.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana ny Tenim-paritra eo amin'ny sehatry ny rafitra fiarovana ny seranan-tsambo
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra ho an'ny fitantanana maharitra any Karaiba
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampitahana ny fanadihadiana Zoning mba hampahafantarana ny fandaminana ny tambajotran'ny seranan-tsambo voaaro an-dranomasina ao Raja Ampat, Indonezia
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso sy fanaraha-maso ny sampan-draharahan'ny Ecosysteme eo amin'ny sehatry ny toeranamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFametrahana ny tambajotra voaaro an-dranomasina miaro amin'ny alàlan'ny rivotramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSohio-ekonomika Manual for Coral Reef Managementmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiaraha-mientana eo amin'ny sehatry ny seranan-tsambo voaaro: Concepts and Strategies from Practice Currentmanokatra fisie PDF